Wazi kanjani ukuba ngubani obona iifoto zam kwi-Instagram awona maqhinga aphezulu! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Instagram IiNtlalo zeNtlalo Abalandeli
Ungazi njani ukuba ngubani obona iifoto zam kwi-Instagram Best trick!
Julayi 8, 2019 0 IiCententarios 1352
Ngaba unexhala lokuba ngubani ojonga iifoto zakho kwi-Instagram? Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ngubani okubonayo buthule, ngaba kungenxa yokufuna ukwazi okanye unexhala? Halala! ufike endaweni eyiyo, kuba kule post ilandelayo ndiza kukuxelela amaqhinga wazi njani ukuba ngubani obona iifoto zam kwi-Instagram Awungekhe uyiphose!
Le nethiwekhi yokuncokola isetyenziswa ngabantu abaninzi bayo yonke iminyaka emhlabeni jikelele. Ingakumbi ukunyusa iifoto kunye nevidiyo, ezinye zineenjongo zobuqu kwaye ezinye zinobuchwephesha. Kuzo zombini ezi meko kunganomdla Yazi abatyelele iprofayile yakho Kulungile?
Khumbula, ikwayiqonga elifanelekileyo lamagcisa amaninzi kunye nabantu abadumileyo abavela kwiinkalo ezahlukeneyo. Zonke, ngaphandle kwamathandabuzo kufuneka babeke iliso kwiiakhawunti zabo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ungayenza njani? Yoyisa! Kwaye qhubeka ufunda.
Kutheni kufuneka ube nezixhobo ngononophelo ukwazi ukuba ngubani obona iifoto zakho ze-Instagram?
I-Instagram yenethiwekhi yentlalo enayo ingqalelo ekhethekileyo kunye nokuzimisela, Ipesenti ebalulekileyo yabantu. Kakhulu kangangokuba ibe liqonga eliqwalasela indlela entsha yokwenza intengiso.
Ngesi sizathu, kungokwemvelo ukuba ufuna ukwazi ukuba ngubani okutyelelayo, zombini ngenxa yokufuna ukwazi nokhuseleko. Ngubani bakushiya uyakuthanda kunye nezimvo, yenza lo msebenzi ube lula, kuba ngezaziso ungazi ngazo.
Kodwa kwenzeka ntoni xa bengacacanga? Kulapho kufuna ukwazi kunye nomngcipheko. Nangona kunjalo, kufuneka ulumke kakhulu, nge Iindlela ozisebenzisayo ukukhangela iindwendwe ezithe cwaka. Ndikhankanya ezinye zezizathu:
Uninzi lwezicelo, ezithi zinokukubonisa obona iifoto zakho, zifuna ukukukhohlisa. Bayakongeza kwindawo yogcino lwedatha yakhe yokukuthumela intengiso.
Ezinye ii-softwares zikhohlakeleyo (intsholongwane) kwaye zifuna ukungena ikhompyuter yakho okanye i-Smartphone ukubangela umonakalo wezixhobo. Ungakhohliswa! Soloko ubuza ngaphambi kokusebenzisa.
Kukho abanye amaqonga abakhulisa ukuze bawe idatha ezinjengeefoto, ulwazi lomntu, iifayile kunye neenkcukacha zebhanki. Oku, ngenjongo yokwenza kamva ubuqhetseba kwikhompyuter baxhasi.
Ezinye zezi zicelo asimahla, kodwa ezinye zikwenza ukuba uthandane emva koko zikuhlawulise.
Phakathi kwezona zinto ziqwalaselweyo zisetyenziselwa ukwazi ukuba ngubani okubonayo kwi-Instagram esinayo:
Ngubani obone iprofayile yam?
Ngubani owandijonga kwi-Instagram
Ndiyakucebisa, musa ukuwela ekuhendweni kwe Ukusetyenziswa kwezicelo zobuqhetseba, uninzi lwazo luphumile ekusebenzeni. Uninzi ngenxa yezikhalazo ezivela kubasebenzisi abafanayo, ke ndiyakucebisa ukuba uqaphele izimvo zoluntu.
Ngalo lonke ixesha jonga umlinganiso onike abanye abasebenzisi kwizicelo ozama ukuzikhuphela. Oku kuyakuvumela ukuba ube nombono malunga nodumo lwesoftware osele uza kuyifumana.
Khumbula, i-Intanethi yindawo evulekele zonke iintlobo zabantu. Kukho abaphuhlisi besoftware, abaneenjongo ezintle kunye nabanye abaneenjongo ezingekho mthethweni kangako.
Ukuba, nangona kunjalo, uzame ezinye zeziqonga, uya kuba nomdla wokwazi:
Yintoni omele uyenze ukuba usebenzise isicelo ukwazi ukuba ngubani okubonayo?
Ukuba ungene kunye namaqonga athile angena kuwo Abasigcini isithembiso sabo, Ndiyakucebisa, landela la manyathelo alapha ngezantsi:
Ngena kwiwebhu kwiwebhusayithi www.instagram.com
Ngenisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Yiya kwiprofayile yakho, swayipha isikrini ngasekhohlo kwaye ucofe kwi icon icon (cogwheel). Ibekwe ecaleni komfanekiso weprofayile yakho ekumgca wexesha-ezantsi.
Yiya "kwizicelo ezigunyazisiweyo"
Buyisa ukufikelela kwizicelo ozikholelwayo.
Guqula iphasiwedi kwaye ubeke entsha.
Ngaphambi kokukhuphela nasiphi na isicelo, qinisekisa ukusebenza kwayo, thintela umngcipheko kwaye ukhusele uthungelwano lwakho.
Inethiwekhi yezoluntu kwi-intanethi eqongeni layo, ayivumeli ukwazi ukuba ngubani ojonga iprofayile yakho buthule Ukuba umntu othile ukubonile kodwa akashiya umkhondo, ithuba lokuba uyazi ukuba lilize.
Kodwa, isenomdla Yazi ngubani owabona iifoto zam ze-instagram. Ukuba unenkampani okanye uphawu lobuqu, uya kufuna ukwazi ukwazi abakhuphisana nabo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba yingxelo eyeyakho, unomdla wokwazi malunga nabo bakutyelelayo uthe cwaka.
Chwayita! Nangona benditshilo ngasentla ukuba ngubani okubonayo, akushiyeki ukulandelela awukwazi ukuba ngubani owenze loo nto. Kodwa, kukho ukhetho xa ushiye umkhondo. Ukulungele ukufumanisa?
Jonga ukwazi ukuba ngubani obona iifoto zam kwi-Instagram
Ayinamsebenzi, ukuba udumile, ukhuthaza i-brand yakho okanye umsebenzisi osebenzayo we-Instagram. Apha ndikhankanya ezinye iindlela zokwazi Ngubani obona iifoto zakho kwi-Instagram:
Xa kukho naluphi na uhlobo lonxibelelwano phakathi komsebenzisi kunye neakhawunti yakho, kukho isaziso. Oku kuyenzeka kwezi meko:
Xa umsebenzisi, xa ujonge iimpapasho zakho uvula "mna ugustaKwifoto okanye ividiyo.
Xa usenza, ezinye izimvo Malunga nezithuba zakho.
Kukho abantu abathi rhoqo babone iimpapasho zakho, oko kukuthi, bayayenza stalkeo yeakhawunti yakho.
Kukho abo bathi ngempazamo Xa bekutyelela, banikezela ngokufana. Ukuba oku kuyenzeka, isaziso siya kukhawuleza ukufikelela kwiselula yakho. Kodwa ukuba awuyifumani ngexesha elibonisiweyo kwaye uqaphela isaziso, loo mntu uya kubuyisela isenzo sakhe.
Ukusebenza kwe-Instagram kukuvumela ukuba utsale umdla wabalandeli bakho ngenxa yokusetyenziswa kwayo okubanzi kunye nokwangoku. Kwakhona, eYeyona ndlela isebenzayo, ukwazi ukuba ngubani okutshutshisayo. Ndicacisa ukuba:
Nangona kunjalo ubude ziiyure ze24, unalo elo xesha lokuba wazi ukuba bazibona iifoto zakho okanye iividiyo. Into ebalulekileyo ngolu khetho kukuba uyazi ukuba ngubani okubonileyo, nokuba umbukeli akakhange athathe elinye inyathelo.
Ngokuphinda ujonge ababukeli bamabali akho, uya kwazi ukuba ngubani okutyelelayo.
Al Shicilela ubuncinci ibali elinye lemihla ngemihla, uya kubekwa esweni abalandeli bakho, ngokusebenzisa izibalo.
Into ekufuneka uyenzile kukuya kwimbali, uswayipe, kwaye wena Uluhlu lwababukeli bakho luya kuvela. Ngokufanayo, ukuba unaye umntu ongamlandelayo, kukho iqhosha lokulandela.
Konke oku kunokwenzeka ngenxa yamabali e-Instagram, inefowni yendwendwe Ngubani owenza iirekhodi.
Apha akunandaba ukuba umsebenzisi unxibelelana okanye cha, xa ujonga ibali lakho ungazi ukuba uyayibona loo foto okanye ividiyo.
Into yokuba umsebenzisi ayibone ibali lakho ayithethi ukuba ubone zonke iifoto zakho okanye ukuba ufake iprofayile yakho. Oku kubonisa kuphela ukuba ujonga ngabom okanye uzibukele nje lo mfanekiso okanye ividiyo.
Ngesi sizathu, ndicebisa ukuba ubhalise ukubonwa kweefoto zakho, kuba ukuba umntu uzenza rhoqo. Ungayithathela ingqalelo, ngaphakathi kuluhlu, "ngubani obona iifoto zam".
Kweli candelo, uya kufumana ezithile ulwazi olubalulekileyo malunga nabalandeli. Phakathi kwayo: lilonke inani labalandeli, izixeko kunye namazwe ahlala kuzo. Ukongeza, ubudala kunye nolona lubaluleke kakhulu ngokwesondo, iiyure kunye neentsuku ezisebenza kakhulu kuzo.
Oku akuxeleli ukuba ngubani obona iifoto zakho, kodwa ukunika ireferensi yohlobo lwabaphulaphuli ukundwendwela
Ukuba uneprofayile yabucala, ngabantu obabonileyo kuphela abanokubona iifoto zakho besivume isicelo sakho ngaphambili. Ngale ndlela, sele unombono wokuba ngoobani kuphela abantu abanokutyelela iphrofayili yakho. Kodwa, awuzokwazi ukuba zingaphi izihlandlo ezenza ngayo okanye ukuba abanakukwenza.
Musa ukuvumela umdla ubethwe, yintoni okubalulekileyo kule nethiwekhi yentlalo kukupapasha imifanekiso esemgangathweniUkufumana abalandeli rhoqo. Oku kuzisa izibonelelo ezinkulu kunokukhuphela usetyenziso oluya kuzisa kuphela ugaxekile kwiselula yakho okanye ulungelelanise ukhuseleko.
Ndiyathemba ukuba ndincedile kwimibuzo yakho, yenza into enye usasaze igama kwaye ukhalimele ezi zicelo. Ukuze abanye abantu bangaweli kumgibe wezidalwa ezinganyanisekanga ezineenjongo ezifihlakeleyo zokufezekisa iinjongo zazo.
Ekugqibeleni, i-Instagram yinethiwekhi yentlalo ekuphuhliseni rhoqo. Kodwa, kwanaphakathi kwiprofayile yayo, ayinazicelo zayo ukwazi ukuba ngubani okutyelelayo. Ukuba unexhala ulwaziso lweefoto zakho,, Ndicebisa ukuba usebenzise kuphela iindlela ezikhankanyiweyo kwaye ulandele kwisithuba esilandelayo.
1 Kutheni kufuneka ube nezixhobo ngononophelo ukwazi ukuba ngubani obona iifoto zakho ze-Instagram?
2 Yintoni omele uyenze ukuba usebenzise isicelo ukwazi ukuba ngubani okubonayo?
3 Jonga ukwazi ukuba ngubani obona iifoto zam kwi-Instagram
3.2 Instagram Stories
Julayi 8, 2019
Funda ukuba ungayikhupheli njani umfanekiso we-Instagram
Funda ngendlela yokwabelana ngamabali kwi-Instagram ukuze ufumane ngakumbi ukutyelelwa kwiprofayile yakho